सय भारुलाई नेपाली रुपैयाँमा साट्न २ रुपैयाँ बट्टा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
सय भारुलाई नेपाली रुपैयाँमा साट्न २ रुपैयाँ बट्टा
आश्विन ६, २०७७ पर्वत पाेर्तेल
काँकडभिट्टा — भारतको चेन्नईबाट घर फर्किएका तनहुँका रमेश नेपालीले आफूसँग भएको १५ हजार भारतीय रुपैयाँलाई नेपाली रुपैयाँमा साट्न ३ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क (बट्टा) तिर्नुपर्‍यो ।
कोरोना संक्रमणपछि नाका बन्द भई भारतसँगको कारोबार शून्य भएपछि सीमा बजारमा नेरु अभाव छ । भारु मनग्गे छ । जसका कारण भारुलाई नेरुमा सटही गर्दा सर्वसाधारण अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य छन् । ‘कोरोना संक्रमणअघिसम्म भारुको माग धेरै थियो,’ काँकडभिट्टाका सटही काउन्टर सञ्चालक चोलानाथ दाहालले भने, ‘अहिले भारु खपत भएकै छैन, जसका कारण भारु लिएर नेरु दिँदा बट्टा लिनु हाम्रो बाध्यता हो ।’ यसअघि सीमावर्ती बजारका सर्वसाधारणले एक हजार भारु लिन १६ सय नेपाली रुपैयाँ दिएर थप ३० रुपैयाँ खर्चनुपर्थ्यो । अहिले एक हजार भारुलाई नेरु बनाउँदा पनि २० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्न लिने गरिएको छ । ‘पहिला नेरुबाट भारु साट्दा थप शुल्क बेहोर्नुपर्थ्यो, अहिले भारुबाट नेरु बनाउँदा थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ स्थानीय उपभोक्ता गणेशबहादुर बस्नेतले भने, ‘जताबाट पनि सर्वसाधारणलाई नै घाटा ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार भारु सय रुपैयाँ साटेबापत ४० पैसा मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ । तर सटही काउन्टरहरूले बैंकको निर्देशन लत्याउँदै आफूखुसी अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन् । ‘भारुबाट नेरु साट्दा पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने । नाका बन्द भएपछि अहिले भारुको माग नै नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी दिपेन बरालले बताए ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ १२:२८
‘छियाछिया परेको घर देखेर रुन मात्रै आउँछ’
आश्विन ६, २०७७ प्रकाश बराल
बागलुङ — ‘मेरो घर माथिल्लो, स्वास्थ्यचौकी तल्लो घर हो । सामान्य बिरामी भए पनि हामीलाई औषधि किन्न, बिरामी भए तत्काल जँचाउन सजिलो थियो । तर पहिरोले न मेरो घर बाँकी छ, न त स्वास्थ्य चौकी ।’ ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ९ की ५१ वर्षीया दिलमाया घर्तीले भदौ १७ गतेको बाढीपहिरोको कहर सम्झिँदै भनिन्, ‘बाढीले छियाछिया परेको घर देखेर रुन मात्रै आउँछ, अब कसरी बनाउने भन्ने पीरले सताएको छ ।’
आफ्नो घरको भग्नावशेष र सिंगो बस्ती उजाड बनेको देखेर उनी बेला–बेला भक्कानिन्छिन् । ‘सिंगो बस्ती उजाड भयो, यहीँ बनाउन सकिँदैन, कता गएर बनाउने ?,’ उनले भनिन् ।
भदौ १७ गते भुजीखोलामा आएको बाढीपहिरोले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर–९ लाँकुरीबोटका १७ घर बगाएको थियो । पहिरोले भत्काएका १ सय २६ घरमध्ये लाँकुरीबोट सबैभन्दा तल्लो गाउँ हो ।
सबैको हारगुहार र तत्काल फोन गरेर सूचना दिइएकाले खोलाको बहाव सानो छँदै यहाँका अधिकांश मानिस भाग्न सफल भए । रातको ११ बजेको बाढी थाहा पाएर धेरैजसो वडा नं. ९ को कार्यालयतर्फ दगुरे । कतिपय पाखो खोज्दै गए ।
‘पानी बेस्सरी परिरहेको थियो । जस्तापाता र ढुंगाको छानामा सुनिने आवाजले पहिरो र खोलाको आवाज पनि उस्तै लाग्यो,’ दिलमायाले भनिन्, ‘सबैले खबर गरिदिएकोले बाँचियो ।’ उनका श्रीमान, २ छोरा र २ छोरी पहिरो आउँदाआउँदै भागेका थिए । माथिल्लो दुवाल भन्ने बस्तीमा सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भयो । लाँकुरीबोटमा भने ३ जनाले ज्यान गुमाए ।
बाढीले अस्थायी स्वास्थ्य चौकीमा रहेको औषधि पनि बगाएको इन्चार्ज दिपक थापाले बताए । पुरानो खोप केन्द्रसहित यहाँको वडा नं. ८ र ९ का लागि घर भाडामा लिएर अस्थायी स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिएको थियो ।
लाँकुरीबोटमा आफन्तकोमा पाहुना आएका एक जना बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका छन् । गलकोट नगरपालिकाबाट ढोरपाटन घुम्न निस्केका चार युवा यहाँ बास बसेका थिए । पहिरो खस्न थालेपछि उनीहरु भागेका थिए । २६ वर्षीय नवीन भण्डारी आफूसँगै मोटरसाइकल पनि बचाउने ध्याउन्नमा थिए । मोटरसाइकल सँगै उनलाई बाढीले बगायो । ‘पाहुना आएका पनि बगे भन्ने खबरले हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्यो,’ दिलमायाले भनिन् ‘उनी अझै भेटिएका छैनन् ।’ लाँकुरीबोटका ५५ वर्षीया कौशीला पुन र २६ वर्षीय बिलास पुन पनि बेपत्ता छन् ।
लाँकुरीबोटकै १७ वर्षीया तारा विकका ३ बहिनी एउटै कोठामा सुतेका थिए । बोलाएको नसुनेपछि बाबु मेहरसिंह विकले ढोका फोरेर छोरीहरु बचाए । निद्रामा उठेर भाग्दा सुत्दा लगाएका कपडा मात्रै थिए । उज्यालो भएपछि छिमेकीले दिएका कपडा लगाएर उनीहरु बसेका छन् । घर ध्वस्त भएको थाहा पाएपछि उनीहरु मावलीमा बस्दै आएका छन् । मेहरसिंहका ८ जनाको परिवार छ । ‘अस्थायी बसोबास छ, अब कसरी घर बनाउने ?’ मेहरसिंहले भने, ‘सुरक्षित घडेरीका लागि पनि जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ पहिरो गएको १२औं दिनमा मात्रै नगरपालिकाबाट दुई बोरा चामल पाएको उनले गुनासो गरे ।
घटनाको ११ दिनपछि वडा नं. ९ को कार्यालयसम्म पुग्ने ट्रयाक खोलिएको छ । शुक्रबारसम्म दुवाल गाउँमा ट्रयाक्टर चल्ने ट्रयाक खुलेको छ । अझै ७ किलोमिटरभन्दा धेरै सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । जिप र अन्य सवारी साधन चल्ने बनाउन दशैंतिहारअघि सम्भव नभएको नगरप्रमुख देबकुमार नेपालीले बताए । ‘सालझण्डी–ढोरपाटन सडक आयोजनाका दुई वटा र नगरपालिकाको एउटा डोजर लगाएर काम थालेका छौं’ उनले भने, ‘पहिलो काम बस्तीसम्म खाद्यान्न लैजान सकिने गरी ट्रयाक खोल्ने, त्यसपछि मात्रै अन्य व्यवस्थापन गर्ने हो ।’
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ १२:२४
कोरोनाबाट इटहरीकी वृद्धाको मृत्यु
पूर्व सांसद मादेनको घरमा आगलागी
खोटाङका जिल्ला समन्वय प्रमुख, सीडीओ र डीएसपीलाई कोरोना
सामुदायिक वनमा काटेर लुकाइएको काठ बरामद
प्रधानमन्त्रीकै गृहनगर अझै सडक मानवमुक्त भएन
उपचारमा सबथोक सकियो तर हिम्मत हारेका छैनन्
अपडेटः सोमबार, १० कात्तिक, २०७७ । २० : ५० बजे